“Ny hafalian’ny eny mba ho mandrakizay” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
R. Herménégilde il y a 6 années
“Ny Ray Masina dia nanentana imbetsaka ny mpifankatia sy ny mpivady vao mba hiaina ny hafalian’ny fitiavana marina sy mamokatra, izay mitombo ao anatin’ny fahamasinana, amin’ny fakana tahaka ny Fianakaviana masina sy amin’ny fandraisana an’i Kristy ao amin’ny fiainam-pianakaviana. Ao anatin’izany ny fihavaozana isan’andro sy ho mandrakizay ny fanolorana feno sy tsy misy takalony ny tena ao anatin’ny fitiavana sakramentaly, izay mandray ny fahasoavan’ny misiterin’ny paka”. Io no nambaran’ny filohan’ny Filan-kevitra pontifikaly momba ny fianakaviana, ny arseveka Mgr Vincenzo Paglia tamin’ny 14 janoary 2014. Nilazana ny fanasan’ny Papa Fransoa ny mpifamofo maniry ny hihaona aminy ny 14 febiroary 2014. Teny fanentanana nitondrana ny fanasana ny hoe: “Ny hafalian’ny eny mba ho mandrakizay”. Ireo efa nanaraka fiofanana fanambadiana (na mariazy) na an-dalam-pikarakarana izany no niantefan’ny fanasana.
Nahatratra 3900 ireo nisoratra anarana hatramin’ny 30 janoary nifaranan’ny fisoratana anarana.
Ny fampatsiahivana indrindra izay hasin’ny mariazy izay no tiana nampitaina tamin’ny fanasana, amin’ny maha sakramenta azy. Tandindon’ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Voajanahary ny fanambadiana ary antson’Andriamanitra, tahaka ny fiantsoana ho relijiozy sy pretra ihany koa. Fiombonam-piainan-dehilahy amim-behivavy. Fa tsy sanatria amin’ny lahy samy lahy na amin’ny vavy samy vavy. Tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra izany. Famaky amin’ny fotoanan’ny fanambadiana kristianina ny voalazan’ny bokin’ny Jenezy hoe: “Handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin’ny vadiny; ary ho nofo iray ihany izy ireo” (2, 24).
Fitiavana no fototry ny fanambadiana. Mifankatia ny mpivady. Miombom-piainana ary mifanaiky amin’ny lafin-javatra maro izay hita amin’ny fiofanana mialoha ny fanambadiana ny antsipiriany. Ny ren’ny mpanatrika dia ilay fifanekena atao eny amin’ny otely masina, eo anatrehan’ny Fiangonana izay vavolombelona. Ilay teny ifanolorana. Iny no maha masina ny fanambadiana.
Raha tsiahivina ilay fifanekena fanao amin’ny fanambadiana kristianina dia tahaka izao: “Izaho R… dia mandray anao R… ho vadiko ary manome toky fa tsy hivadika aminao na an-kasoavana na an-karatsiana na inon-kidona na inon-kihatra, ka ho tia sy hanaja anao mandritra ny andro rehetra iainako.” Hohamarinin’ny pretra izany amin’ny teny tahaka izao: “Hankatoavin’Andriamanitra sy hohamasininy anie izay fifanekenareo teto anatrehan’ny Fiangonana izao ary hofenoiny tso-drano mitafotafo ianareo. Izay akamban’Andriamanitra aoka tsy hosarahin’olombelona.” Mahafaoka ny votoatin’ny fanambadiana kristianina katolika ireo teny ireo.
Ho an’ny mpivady rehetra
Marina fa tany Roma no nanaovan’ny Papa ny fampianarana. Fa amin’ny maha iray ny Fiangonana katolika dia miantefa amin’ny mpifamofo sy mikasa hiroso amin’ny fanambadiana kristianina katolika rehetra maneran-tany izany. Tsy takona afenina manko ny zava-misy mikasika ny fanambadiana ankehitriny, izay mandalo fotoan-tsarotra sy fivakisana na dia amin’ny fianakaviana fantatra fa kristianina aza. Very hasina ny fanambadiana ka sanatria toa lamaody na haitraitra fotsiny no anaovana azy. Zava-misy ny faharavan’ny fanambadiana noho ny antony maro, toy ny vono, fampirafesana, fijabahan’ny hafa amin’ny tokantrano. Matetika koa izany noho ny olan-drafozana sy vinanto, ny tsy fahampiam-bola. Eo koa ny tsy fahamatorana, satria kely loatra dia niditra amin’izany hitokan-trano izany, sns. Fa isan’ny fositra lehibe manimba ny fanambadiana ihany, ankoatra izay, ny tsy fahaizana mandefitra. Tsy tokony ho hita amin’ny fanambadiana kristianina ireo lesoka ireo. Ka izay no tena anton’ity hetsika nataon’ny Papa ity, hampatsiahivana ny hasin’ny fanambadiana sy ny maha sakramenta azy. Hisorohana ny fisarahana izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. “Mba ho mandrakizay ny hafalian’ny eny”. Ny fikoloana ny fitiavana no hahatanteraka izany. Ao anatin’izany ny fifampidinihina mandrakariva manoloana ny olana mety hitranga.
Ara-tantara, misy telo ireo lazaina fa Saint Valentin izay samy maty maritiora. Ny iray, ohatra, dia pretra italianina maty maritiora tany Roma tany amin’ny taona 270, araka ny hita amin’ny rakibolana frantsay. Antony dia noho izy nitso-drano mariazy kanefa efa voararan’ny lalàna ny fanaovana izany. Tamin’ny taona 1496 izy no nasandratry ny Papa Alexandre faha 6 ho olomasina. Izay no nahatonga azy ho mpiahy ny mpifankatia.